Mpamangy : Eny ary tompoko; Manoloana izao tsy fahasalamana mahazo an’i (lazaina ny anaran’ilay olona marary) dia tonga eto izahay mpiara miasa aminy. Tsapanay mantsy fa tanana havia sy havanana isika, ka izay didiana maharary. Ka rehefa tojo tsy fahasalamana toy izao, dia rariny loatra ary hitsiny indrindra raha mamangy. Noho izany ry (lazaina ny anaran’ilay olona marary) dia… read more »
Mpiarahaba : Ry mpianakain’ny finoana; Mamelaha ahy ianareo hiarahaba ity zaza vita batisa (na Batemy) ity satria Sambatra samy hazo, hono, ny ambiaty fa nahazo to tamin’Andriamanitra ka nataon’ny olona ho famataran-taona; Sambatra samy zava-maniry ny maintsoririnina, fa fahavaratra miara-misalahy amin’ny maro, ririnina tombondahiny ihany; Fa sambatra samy sambatra kosa i (lazaina ny anaran’ilay zaza)… read more »
Mpangataka : Tompokolahy sy Tompokovavy; Sodisodika railovy, rimorimo andiam-boromanga, manitra vonifanja re ny tsioka fa mahatsara vahiny ny eto(lazaina ny anaran’ny toerana ikabariana) ankehitriny. Anio mantsy, ilay andro iray toa zato, ny tapany be noho ny erany, ny silany tsy atakalo ny manontolo. Ekena fa ny fianakaviana avy art amin’ny zatovovavy foana no andrasana amin’ny… read more »
Mpamangy : Tompokolahy sy Tompokovavy; Hoy ny fitenenana manao hoe: « ny zanaka no voalohan-karena ». Noho izany dia arabaina ianareo mivady, fa nomen’Andriamanitra ny fara. Maroroa taiza, ary enga anie ity zaza ity ho salama lalandava ka hazoto hanompo an’Andriamanitra; ary hanondrotra avo ny voninahitry ny fianakaviana. Manaraka izany, indro rom-patsa kely avy aty aminay tapaka sy… read more »